Lahatsoratra nampiasa ny teny miverina matetika: Fitokonana	Miverena Fifandonana teny Ankatso – Mpianatra iray no naratra, niraradraraka ny baomba mandatsa-dranomaso Nipoaka ny basy namoaka bala fingotry ny mpitandro filaminana omaly teny Ankatso. Ny handrin’ny mpianatra iray, taona faharoa ao amin’ny lalam-piofanana fizika, Rajerison Herimanoa, 21 taona no niantefan’ ny bala ka nandratra azy. « Tsy anisan’ny mpianatra nitokona izy fa handeha hianatra, nijorojoro teo am-pidirana ny efitrano fianarany teny anglisy izy no niantefan’ny bala, efa aty anatin’ny faritry ny oniversite », hoy ny mpandraharaha iray.
Nidina an-dalambe, nisakana ny fifamoivoizana teny Ankatso ny mpianatra avy eny amin’ny Polyteknika, eny Vontovorona, ka izay no nahatonga ny Emmo Reg teny an-toerana, nanaparitaka azy ireo tokony ho tamin’ny 11 ora. Nitora-bato avy any anatin’ny faritry ny oniversite ireo mpianatra, rehefa natosiky ny mpitandro filaminana niala ny arabe.
Namoaka mpianatra Ny maraina,dia noteren’izy ireo nivoaka ireo ny mpianatra tao amin’ny sampana Lalàna sy Toekarena, ka notarihiny nidina an-dalambe. Vitsy ihany anefa ny mpianatra nanaraka izany. Nifampiraharaha tamin’ny Emmo Reg izy ireo. « Mitolona am-pilaminana izahay hiverenan’ny fampianarana fa te hianatra », hoy Andrianaivonirina Anjarasoa Rado, filohan’ny fikambanan’ny mpianatra. « Izahay tsy maintsy miantoka ny hahazoan’ny olona mivezivezy malalaka, tsy ho sakantsakananareo toy izao. Milaza mitolona am-pilaminana ianareo kanefa efa manangona vato hitorahana anay, izay efa mandika lalàna”, hoy kosa ny avy amin’ny Emmo Reg.
Nivoaka nandroaka ny Emmo Reg nanenjika ny mpianatra tao amin’ny faritry ny oniversite ny filohany, Andriatsimahavandy Abel, izay nanamarika fa efa nisy seza nopotehin’ny mpanao fihetsiketsehana tany amin’ny katedralin’ny Degs. « Misy fandikàna ny fahaleovantenan’ny oniversite. Mitaky ny hampitomboana ny vatsim-pianarana sy hampihenana ny sara fisoratana anarana sy sara fampiasana laboratoara izahay », hoy i Tsarabohitra Jean Edgard, filoha lefitry ny fikambanan’ny mpianatra Polyteknika. Milaza mbola hanohy ny hetsiny ireo mpianatra ireo raha tsy voavaha ny olana.
Fitokonana SEMPAMA – Mbola hiampy ireo mpampianatra ho tapaka karama Mandrangaranga indray ny fampitahorana. »Hitombo ireo mpampianatra hotapahina karama raha mbola tsy miverina miasa », araka ny fanambaràn’ ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Manoro Régis. Ireo mpampianatra mpiasam-panjakana rehetra nandefasana taratasy fiantsoana hanara-maso sy hitsara ny fanadinam-panjakana nefa tsy tonga hana- tontosa izany no ho voakasik’ io fanapahana karama io.
Amin’ny talata 07 aogositra izao no handeha ny fanadinam-panjakana voalohany amin’ity taona ity. Efa voa-zaran’ireo fari-piadidiam-pampi- anarana (Cisco) samihafa ny taratasy fiantsoana, na ho an’ ny mpiadina izany, na ho an’ ny mpampianatra. Eo ihany koa ny fandraisana mpampia-natra hafa hanatanteraka ny fanadinana.
Ny ankamaroan’ireo mpam-pianatra, mivondrona ao anatin’ ny sendikan’ny mpampianatra mpanabe na Sempama any amin’ny faritra, izay tsy tafiditra tao anatin’ny lisitry ny nahazo »réquisition de service » anefa miziriziry amin’ny heviny.
« Tsy misy fanadinana mandeha izany eo. Hovo-noina ve ny ankizy malagasy ka terena hanao fanadinana amin’ny fandaharam-pianarana tsy vita? », hoy izy ireo.
Fitokonana – Raikitra ny fitadiavana mpampianatra amin’ny fanadinana 10 andro sisa. Hentitra omaly ny talen’ny kabinetran’ ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena nilaza fa tsy hihemotra intsony ny fanadinam-panjakana. “Efa mipetraka sy mirindra avokoa ny lamina rehetra. Faritra vitsivitsy sisa no mbola misy olana. Mpampianatra maro kosa no ilaina hanara-maso sy hitsara ny fanadinana ary miankina amin’ny filan’ny fari-piadidiam-pampianarana (Cisco) sy ny isan’ny ivon-toeram-panadinana ny isan’izany”, hoy Razafimanantsoa Christophe.
Fitokonan’ny SEMPAMA – Nolavin’ny filankevi-panjakana ny fitorian’ny mpampianatra Tsy nahita rirany indray. Nahavory lanona olona sy mpampianatra maro omaly maraina ny valin’ny fitoriana napetraky ny sendikan’ny mpampianatra mpanabe (Sempama) tetsy amin’ ny filankevi-panjakana Anosy. Nolavin’ity farany anefa ny fitoriana fiandry napetraky ny Sempama raha mbola miandry amin’ny herinandro ny momba ny fampiatoana sy ny fana- foanana ny fampiharana ny « réquisition ».
« Tsy mampiova ny hetsika ireny. Hitohy hatrany izany ary vao mainka aza mety hihamafy », araka ny fanehoankevitry Raharovoatra Claude, filohan’ny Sempama.
Nijanona tetsy amin’ ny lalan’ny fahafahana Ampefiloha hatramin’ny omaly ny hetsik’ireto sendika ireto. Taorian’io hetsika io no nitohizan’ ny fivoriana nataon’izy ireo handinihana indray ny mety ho tohiny.
Tafatafa tamin’i… Razafimanantsoa Jean Christophe
Tale kabinetra Fanabeazam-pirenena
« Mpampianatra mpitokona 171 no mety ho tapaka karama »
Nilaza ho vonona hampihatra sazy ihany ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, saingy nanilika ny andraikitra any amin’ny fanjakana. Nilaza ny talen’ny kabinetran’ny minisitera fa efa lasa any amin’ny minisiteran’ny Tetibola ny lisitra mirakitra ireo mpampianatra tsy mbola niverina nampianatra.
- Ao Raha: Tena sahy handray fepetra amin’ireo mpampianatra mitokona tokoa ve ianareo ?
Razafimanantsoa Jean Christophe: Tsy maintsy natao ny fandinihana lalina sy ny ala nenina rehetra. Rehefa tena zohiana hatramin’ny talata maraina teo dia nahatratra 38% tamin’ireo mpampianatra no niverina nampianatra. Ny harivan’io no nangatahina nandritra ny filankevitry ny governemanta ny lisitr’ireo tsy mbola nampianatra ary any amin’ny minisiteran’ny Tetibola izany.
- AR: Midika ve izany fa hiroso amin’ny fanapahana karama ianareo ?
RJC: Matoa natao ny fanentanana sy ny ala nenina samihafa ary efa napetraka ny fepetra dia tokony hisy ny sazy. Ny fanjakana anefa no tompon’ny teny farany momba ireo mpampianatra 171 tsy niverina nampianatra.
- AR: Raha tena miziriziry tsy hampianatra mihitsy ireo mpampianatra ireo na dia efa tapaka karama aza dia mety handeha ihany ve ny fanadinana ?
RJC: Manodidina ny 60 000 ny isan’ny mpampianatra manerana ny Nosy. Raha ny 200 latsaka anefa no tsy hampianatra dia kely ihany izany ary tsy sakana mihitsy amin’ny fampandehanana ny fanadinana.
- AR: Inona ary ny fepetra horaisina mba hisorohana ny tsy fisian’ny fanadinana ?
RJC: Efa miahy toy ny anakandriamaso ny fampandehanana ny fanadinana ny minisitera. Tsy maintsy apetraka ny lisitra fiandry hanatontosana ny fanadinana ary efa napetraka ihany koa ny fepetra ho fitandroana ny fiparitahan’ny laza adina sy ny fiarovana ny taratasim-panadinana aorian’ny fanadinana.
Fitokonana mpiasam-panjakana – Mbola isalasalana hatrany ny fanapahana karama Sarotra ny fandidiana. Very hevitra ihany ny amin’ny fepetra horaisina manoloana ireo mpitsabo mpanampy sy dokotera ary mpampianatra efa noterena handray ny asany nefa mbola manohy ny fitokonana ny eo anivon’ ny mpanatanteraka.
Efa samy nandrangaranga ny hirosoana amin’ny fanapahana karama anefa na ireo tompon’andraikitry ny minisitera na ny Filohan’ ny tetezamita.
« Mbola tsy afaka milaza izay dingana mety hoarahina amin’ny fanapahana karama aloha ny tenako, fa mbola ao anatin’ny dinika miaraka amin’ny minisitra », hoy Ranaivoson Olga, lehibe misahana ny mpiasa eo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena.
Tale iray ao amin’ny minisiteran’ny Asam-panjakana kosa indray no nilaza fa « tsy maintsy mandalo dingana maromaro vao ho tonga amin’izany fanapahana karama izany ».
Samy manao io fikaonandoha io avokoa na ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka na ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena. Ny andro tokony handraisan’ ireo mpampianatra sy mpitsabo mpanampy ary dokotera mpiasam-panjakana karama rahateo efa miha manakaiky ihany satria dia isaky ny faha 20-n’ny volana izany.